Izimvume ezintsha zikhombisa ukunwetshwa okusha kwe-Apple "Isabel Project" | Ngivela kwa-mac
Izimvume ezintsha ziphakamisa ukunwetshwa okusha kwe-Apple "Isabel Project"
Imininingwane emisha ivela kwamanye amaphrojekthi we-Apple esazi kancane ngawo, nokuthi yikuphi okuncane okuvame ukushiwo. I- "Isabel Project", umqondo osuselwe ochungechungeni lwezandiso ezizokwenzeka cishe imizuzu eyi-15 ukusuka enkabeni ye- Reno, esifundeni se Nevada. Lapho, Inkampani ezinze eCupertino inesinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zedatha enaso eMelika.
Sizwe ngalesi sikhungo sedatha okokuqala ngqa maphakathi no-2012, futhi kusukela lapho sinwetshiwe kabili, ukuze sikwazi ukunikezela yonke idatha yedatha eyenziwe ngabasebenzisi ku-block. Manje, imvume entsha ecelwe yizizwe ngezizwe zaseMelika isibonisa ukuthi inhloso abanayo ukwandiswa okusha kwezikhungo zabo.
I-BuildZoom, iwebhusayithi ekhethekile ekufuneni amalayisense okwakha nezinguquko e-United States, ikubonile lokho I-Apple ifake isicelo semvume (esivele isinikiwe) yokwandiswa okuqhubekayo okungabiza cishe ama- $ 50.7 wezigidi. Sikhuluma ngamahektha ayi-3.5 wezindawo ezintsha, asatshalaliswa phakathi kwezakhiwo eziyi-8, njengoba kukhonjisiwe embhalweni okukhulunywa ngawo.
Lesi sandiso esisha, sabhapathizwa njenge- "Isabel III Project", Kungokugcina kwezandiso zesikhungo sedatha zenkampani yaseCalifornia eNevada. Ngaphezu kwalokho, kanye nale projekthi enkulu, I-Apple inethemba lokuqinisekisa ukusetshenziswa kwayo ngamandla ayi-100% ahlanzekile ngokwakha ipulazi elisha lepaneli elanga lokho kungakhiqiza amandla kagesi angamamegawathi angama-200.
Lesi sandiso siyakuqinisekisa lokho I-Apple inikela ngokubaluleka okuthe xaxa ezinsizakalweni zayo ezifana ne-Apple Music, iCloud noma i-App Store. Ngakho-ke, siyaqonda ukuthi yizindaba ezinhle ngoba lokho kungasho ukuthi ukusetshenziswa kwalezi zinsizakalo akuyeki ukwanda. Eqinisweni, muva nje imininingwane enikezwe yinkampani ibikade ikhuluma ngokungagunci ekusetshenzisweni kwezinsizakalo zayo ezixhunyiwe efwini. Lokhu kufaka nenani elikhulu lemali engenayo yenkampani.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Izimvume ezintsha ziphakamisa ukunwetshwa okusha kwe-Apple "Isabel Project"
Yenza lula futhi usheshise ukuqala kwakho kwe-Mac ngokulawula izinto zokuqalisa
I-DeskApp entsha yohlelo lokusebenza lwe-YouTube, ku-Mac App Store